MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA EEYAHA BORTUQIISKA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada eeyaha Bortuqiiska
Parker ee Eyga Biyoodka Portuguese-ka ah 10 sano jir— 'Parker wuxuu jeclaa inuu ordo oo uu dabaqadaha daba ordayo. Wuxuu ahaa qof saaxiib la ah qoyskiisa oo had iyo jeer doonaya inuu nala joogo. Wuxuu aad u jeclaa fuulida gaariga haddii aadan daaqadda hoos u dhigin wuxuu heli lahaa waddo uu isaga laftiisa ugu soo rogo. Wuxuu xaas weyn u ahaa xaaskeyga markii ay orodday. '
Eyga Biyoodka Bortuqiisku waa eey dhexdhexaad ah oo muruq leh. Khadka toosan ayaa toosan oo siman. Madaxa ballaadhan, ee goglan ayaa waxoogaa ka sii dheer ka dibna muuska. Afku wuxuu leeyahay joogsi si fiican loo qeexay. Sanka madoobaa waa ballaadhan yahay. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Indhaha dhex-dhexaadka ah, wareegsan ayaa mugdi ah. Dhegaha wadnaha u eg ayaa la dhigay meel sare oo sudhan. Dabada looma xiro si ay u caawiso dabaasha, way ka sii dhumuc weyn tahay salka iyo taabashada. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Lugaha waa toosan yihiin. Cagaha ayaa guntin oo ka caawiya eeyga dabaasha. Koodhka hal-lakabka ah waa mid qaro weyn oo midabkiisu jajaban yahay ama mowjad ahaan u rogrogmi karo. Midabada koofiyaddu waxay ku yimaadaan madow, caddaan, midabyo kala geddisan oo bunni ah, midabbo midabkeedu yahay caddaan oo leh dhibco madow, madow ama bunni oo leh calaamado cad, dawaco lacag ah iyo cawl.
Eyga Bortuqiiska ah waa eey daacad ah, nool, biyo jecel. Layaab, maaweelo, xamaasad iyo baashaal lagu ag joogo, badanaa dadka way ka qosliyaan. Noocani waa mid jecel qoyskiisa. Waxay leeyihiin adkeyn weyn, jimicsi kugu filanna way deganaan doonaan. Way ku fiican yihiin carruurta waxayna badanaa la jaanqaadaan eeyaha kale iyo xayawaanka rabaayadda ah iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin. Waxay u baahan yihiin inay bartaan bisadaha si shirkadooda aysan wax dhibaato ah u keenin. Iyagu waa kuwo siman oo wanaagsan. Geesi, feejignaan sare leh, caqli badan oo tababaran raba inuu shaqeeyo oo dhakhso u barto una fahmo tilmaamaha. Tababbarka eeyahaas ayaan ahayn wax adag haddii aad fahanto sida loo sameeyo si habboon ula xiriir xayawaanka xayawaanka . Waxay aad ugu nugul yihiin codka codka milkiilayaashuna waa inay ahaadaan deggan, laakiin muuji awood joogto ah . Maskaxda ku hay in eeygan aadka u caqliga badan uu qaadan doono xorriyado haddii uu dareemo inuu ka maskax adag yahay milkiilayaashiisa. Hubso inaad joogto tahay, adkaynayso oo aad ku kalsoon tahay habka aad u maamusho eeyga. Noocani wuxuu u maleyn karaa milkiilihiisa! Doonitaan iyo xiise u leh raalli ahaanshaha, kani waa eey aamin ah, adeeca. Waxay sameeyaan ilaalin wanaagsan. Waxay leeyihiin dareen ur wanaagsan. Waxay ku habboon tahay tijaabinta xirfadaha firfircoonida iyo cayaaraha kale ee badan. Ey-biyoodka Eyga ee Bortuqiiska ayaa caan ku ah calalin . Hubso inaad siiso iyaga waxyaabaha loo ogol yahay inay ku calashaan. Heerarka xukunku way kala duwan yihiin xitaa isla qashinka. Heerka dhaqdhaqaaqa iyo dhaqdhaqaaqa gudaha aad ayey ugu kala duwan yihiin kuwa shaqsiyaadka iska leh iyo awooda ay u leeyihiin inay isku dheelitiraan baahida eyga. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, joogto ah, kalsooni leh hogaamiyaha xirmada , bixinta jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah . Haddii aad aragtid eeygaaga inuu ku ciyey si uu ula xiriiro, waxaad u baahan tahay inaad eeyga aamusiso oo aad eegto kanaga xirfadaha hogaaminta . Ey kaa oohinaya qaabkaas wuxuu muujinayaa astaamo arrimo qaawan. Ha u oggolaan eeyaha inay ku bood bini'aadamka .
Dhererka: Ragga 20 - 22 inji (50 - 57 cm) Dumarka 17 - 20 inji (43 - 52 cm)
Miisaanka: Ragga 42 - 55 rodol (19 - 25 kg) Dumarka 35 - 49 rodol (16 - 22 kg)
Khadadka qaar ayaa u nugul cudurka dysplasia iyo PRA. Ku soo dhowaanshaha Cudurka Kaydinta ee GM-1, oo ah cudur neerfaha dilaa ah. Eeyahaas loo adeegsaday taranka waa in la tijaabiyo. Waxay soo baxdaa marka eeydu 6 bilood jir tahay.
Eyga Biyoodka Bortuqiisku wuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Waa dhex dhexaad firfircoon oo daarad yar ayaa ku filnaan doonta. Waxay ku noolaan kartaa banaanka cimilo dhex dhexaad ah, laakiin waxay noqon laheyd mid aad ugu farxad badan ku noolaashaha qoyskeeda iyo maalmo ku qaadashada ardaaga.
boqorka charles cavalier poodle mix
Eyga Biyoodka Bortuqiisku waa eey firfircoon, oo shaqeeya noocaas oo leh adkeyn weyn. Waxay ubaahantahay jimicsi jireed iyo maskaxeed maalinle ah, oo ay kujiraan maalinle, dheer, kacsan socod ama orod si loogu qanciyo dareenkeeda tahriib. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Noocani wuxuu ugu fiican yahay shaqo la qabto. Waxay jecel yihiin inay dabaashaan mana jiraan wax eeygaagu jeclaan ka badan yahay haddii aad ul ama kubbad biyo ku dhex tuurtid si ay dib ula soo baxdo. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doontaa romp xoog leh. Waxay sameeyaan saaxiibo orod fiican. Iyagu waa eeyo tamar badan leh oo u baahan milkiileyaal tamar-sare leh oo iyaga siin kara wax badan oo aan ahayn oo keliya jidh ahaaneed, laakiin dhiirrigelin maskaxeed, oo ay weheliyaan hoggaan adag oo xubin kasta oo qoys ah ka tirsan. Eeyahaas la siiyay qaab-dhismeedka noocan ah waxay ka dhigayaan xayawaan aad u fiican iyo eeyaha shaqeeya iyo kuwa maqan ayaa u muuqda inay noqdaan eeyo dhibaato leh.
Eyga Biyoodka Bortuqiiska waa in si joogto ah loo cadeeyo oo loo shanleeyaa. Nooca aasaasiga ah ee jaakadu ma go'aamiso goynta ay ku jiraan. Waa dookh shaqsiyeed. Laba koodhadh jajab ayaa loo isticmaalaa: Hal clip oo wejiga iyo gadaal laga xiiray, iyo retriever shaqeynaya ama xayawaanka xayawaanka ah ee eygu ku karbaashayo sidaa darteed jaakadu waxay u muuqataa inay dherer dhererkeedu dhan tahay. Noocani waa mid cadaanyo-xasaasiyadeed u roon una wanaagsan dadka xasaasiyadda qaba. Koodhku wax yar buu daadiyaa timo la'aan. Koodhku si tartiib tartiib ah ayuu u koraa marka loo eego kan a poodle umana baahna maqasino ama xoqid joogto ah.
Eyga Bortuqiiska, sida magacaba ka muuqata, wuxuu u dhashay dalka Boortaqiiska. Dhulkeeda hooyo waxaa lagu magacaabaa Cão de Água, oo macnaheedu yahay 'eyga biyaha.' Waxaa laga soo saaray eeyaha shaqeeya ee Jasiiradda Iberia. Dabaalyahanno aad u fiican, eeyaha waxay la shaqeynayeen kalluumeysatada reer Boortaqiiska boqolaal sano iyagoo qabanayay shaqooyin badan. Aad ayey u qiimo badnaayeen waxaana loo tixgeliyey inay kamid yihiin shaqaalaha. Gooska libaaxu wuxuu lahaa ujeedo gaar ah. Kalluumeysatadu waxay xiiri jireen gadaasha dambe iyo sanka si ay uga caawiyaan dabaasha iyo uga shaqeynta biyaha. Timo dheer ayaa loo daayay si ay uga caawiso in xubnaha muhiimka ah ay u kululaadaan kana ilaaliyaan eeyga dhaawaca jirka ugu weyn, qoorta iyo madaxa. Eeyadu waxay ka shaqeyn jireen dhaqashada iyo soo qabashada kalluunka, waxay soo ceshan jireen shabagyo jabay ama wax kasta oo biyaha ku dhacay, iyagoo farriimo ka qaadayay mid ka mid ah maraakiibta kale ama markab ilaa xeebta oo xitaa ilaalinayay doomaha ku jira dekeddaha shisheeye. Eeyadu aad ayey caan u ahaayeen xitaa kalluumeysatada aan ganacsiga ahayn waxay kireysan karaan hal safaradooda kalluumeysi. Markii waqtiga la sii waday ayaa tikniyoolajiyadii la beddelay shaqooyinkii eeyaha iyadoo sannadihii 1930naadkii tiradii taranka ay si aad ah hoos ugu dhacday. Ma ahayn illaa nin maalqabeen ah oo reer Bortuqiis ah oo la yiraahdo Vasco Bensaude uu bilaabay barnaamij taranta isagoo isku dayaya inuu badbaadiyo taranka ayay tiradoodu mar kale kor u kacday. Labadii ugu horreysay ee Eygii Biyaha ee Boortaqiiska ahaa ayaa la keenay Mareykanka 1958. 1972dii ayaa la sameeyay Naadiga Eyga Ee Biyoodka Bortuqiiska ee Mareykanka. Sannadkii 1983 ayaa markii ugu horreysay waxaa aqoonsaday hay'adda AKC. Hibooyinka Biyaha ee Bortuqiiska qaar ka mid ah waa adeecid, tijaabooyin biyo ah, kacsanaan, eey daaweyn iyo eey caawimaad ah.
Gun Ey, AKC oo shaqeynaya
PWDCAI = Naadiga Eyga Biyoodka Bortuqiiska ee Mareykanka, Inc.
Eygan qurxoon waxaa lagu magacaabaa Boomer. Lahaanshaha sawirka Boomer iyo Rocky, oo ah laba Eeyood oo Bortuqiis ah
Ey Ey Biyo Bortuqiis ah! Lahaanshaha sawirka Jose Fontes Cristalmar / Portuguese Water Dog, Rio de Janeiro / Brazil
Lahaanshaha sawirka Jose Fontes Cristalmar / Portuguese Water Dog - Rio de Janeiro / Brazil
daryeel tzu Ey yaryar oo iib ah
Boomer wuxuu rabaa habsiin!
Kani waa Amalie of Dream Wheel Kennels, laakiin waxaa loogu yeeraa Diddl kadib jiirka majaajillada Jarmalka.
Lahaanshaha sawirka Jose Fontes, Cristalmar / Portuguese Dog, Rio de Janeiro / Brazil
'Zoie waa gabar nasiib wacan oo nasiib wanaag leh oo reer Bortuqiis ah. Iyadu waa eey ka weyn, hadda 10 jir ah, laakiin iyadu ma hubo inaysan u dhaqmin sida oo kale! Waxay jeceshahay inay ku ordo xeebta, waxqabadkeeduna ugu xiisaha badan yahay baaskiilkayga dhinac ka raac . Waxay kaloo jeceshahay dabaasha. Zoie waa eey aad u caqli badan, garanaya in ka badan 20 tabaha iyo amarrada. Iyadu waxay garab taagneyd 10 sano, mana codsan karin eey ka fiican. '
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo Ey Biyoodka Bortuqiis ah
Sawirada Eyga Biyoodka Portuguese 1
Boqor Charles cavalier spaniel isku darka adhijir Jarmal
iskudhafka farantiiska faransiiska ingiriiska ee iibka ah
malaamute husky Jarmalka adhijir isku darka
Ingiriisi isku darka spaniel Cocker Maraykanka